Tottori प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र कुराहरु - Best of Japan
तोतोरी प्रान्त चुगोकु जिल्लाको जापान सागर छेउमा छ। यो प्रान्त जापान मा कम से कम जनसंख्याको साथ क्षेत्रहरु मध्ये एक हो। यस प्रान्तको जनसंख्या 560,000०,००० मात्र छ। तर यस शान्त संसारमा तपाईको दिमागलाई निको पार्ने धेरै ठाउँहरू छन्। यस पृष्ठमा, म तोतोटीरी प्रान्तमा घुमाउने ठाउँहरू आदि परिचय गर्नेछु।
Torrori को रूपरेखा
Tottori Sand Sandes
तोटोरी प्रान्त चुगोकु क्षेत्रको जापान सागर छेउमा अवस्थित छ। यो पूर्वी क्षेत्रको १२ 125 किलोमिटर र उत्तर 60० किलोमिटर उत्तर-दक्षिणको विस्तारित क्षेत्र हो। यस कारणका लागि, तोतोरी प्रिफेक्चर प्राय: पूर्वपट्टि र पश्चिम तर्फ छुट्टै वर्णन गरिन्छ।
तोतोरी प्रान्तको पश्चिम तर्फको केन्द्र तोतोरी शहर हो। यस शहरमा उत्तम पर्यटक आकर्षण तोतोरी दुने हो। यो बालुवाको झिल्ली पूर्व र पश्चिममा करिब १ 16 किलोमिटर, उत्तर र दक्षिणमा करिब २.2.4 किलोमिटर फैलिएको छ र यसलाई जापानको सबैभन्दा ठूलो बालुवाको रूपमा चिनिन्छ। जापान सामान्यतया हरियालीमा धनी छ, यसैले ठूला बालुवा झुकाव असामान्य छ।
पूर्वी तोतोरी प्रान्तमा हिउँद प्रायः जाडोमा पर्छ। जे होस्, यसले धेरै ढेर गर्दैन। यहाँ जाडोमा, तपाईं धेरै स्वादिष्ट क्र्याब खान सक्नुहुन्छ।
तोतोरी प्रान्तको पश्चिम तर्फको केन्द्र योनागो शहर हो। यस शहरमा काइके ओन्सेन भनिने एक स्पा शहर छ। यस क्षेत्रमा पनि क्रेबहरू जाडोमा धेरै स्वादिष्ट हुन्छन्।
तोतोरी प्रिफेक्चरमा दुईवटा एयरपोर्टहरू छन्:
तोतोरी एयरपोर्ट तोटोरी शहर केन्द्रको लगभग km किमी उत्तर पश्चिममा अवस्थित छ। यो एयरपोर्टबाट JR Tottori स्टेशन सम्म बस लाग्छ २० मिनेट। यस एयरपोर्टमा, नियमित उडानहरू केवल टोकियोको हनेडा एयरपोर्टसँग मात्र सञ्चालन भइरहेका छन्।
योनागो एयरपोर्ट जेआर योनागो स्टेशनको ११ किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित छ। यो विमानस्थलबाट योनागो स्टेशनको लागि बसबाट करीव minutes० मिनेट हुन्छ।
नियमित उडानहरू केवल टोकियोमा हनेडा एयरपोर्टसँग सञ्चालन भइरहेका छन्।
Shinkansen Tottori प्रान्तमा चल्दैन। मुख्य रेलवे JR सैन-इन मुख्य लाइन हो जुन पूर्व र पश्चिममा सञ्चालित हुन्छ। तोट्टोरी स्टेशनबाट, तपाईं सेतो इनल्यान्ड समुद्री छेउमा चीजु एक्सप्रेसबाट जान सक्नुहुन्छ। योनागो स्टेशन बाट तपाई ओकेयामा दिशा जान सक्नुहुन्छ JR Hakubi लाइन बाट।
टोटोरी बालुवा टिब्दी, टोटोरी, जापान
टोटोरी Sand Sandes Tottori प्रान्त को प्रतीक हो। यो Tottori स्टेशन बाट बस बाट लगभग २० मिनेट छ।
वास्तवमा तपाईले यो बालुवाको टिब्बा धेरै ठूलो महसुस गर्नुहुनेछ। किनकि, यो बालुवाको झिल्ली मात्र विस्तृत छैन, तर उचाईमा पनि भिन्नता छ। सम्पूर्ण टिब्बाको उचाई भिन्नता meters ० मिटर छ। "सुरीबाची" भनिने पहाडको उचाई 90० मिटर छ। तोट्टोरी स्यान्ड ड्युन्समा धेरै पर्यटकहरू यस पहाडमा चढ्छन्। यहाँ चढ्न धेरै गाह्रो छ। जे होस्, जब तपाईं चढ्नुहुनेछ, तपाईं अद्भुत परिदृश्यको मजा लिन सक्षम हुनुहुनेछ।
जापान धेरै जsts्गल भएको देश हो, तर त्यहाँ मरुभूमि जस्तो स्थानहरू छन्। यदि तपाईं पश्चिमी होन्शुको जापानको सागरमा अवस्थित टोटोरी स्यान्ड ड्युन्समा जानु भयो भने, तपाईं अगाडि विशाल परिदृश्य देख्नुहुनेछ। तोतोरी स्यान्ड ड्युन्स मात्र ठूला छैनन् ...
>> Tottori Sand Sandes को विवरणको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
टोटेरी प्रान्तमा काइके ओन्सेन = एडोब स्टक
Kaike Onsen एक स्पा शहर हो तोतोरी प्रान्तको पश्चिमी भागमा अवस्थित छ। JR योनागो स्टेशनबाट लगभग २० मिनेट जति बसमा छ।
तोटोरी प्रान्तमा काइके ओन्सेन बाहेक धेरै राम्रा तातो स्प्रि .हरू छन्। ती मध्येका, म Kaike Onsen सिफारिश गर्न चाहान्छु किनकि तपाईंले माथिको चित्रमा देखाइएको सुन्दर दृश्यहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
Kaike Onsen अघि, "Yumigahama" भनिने एक सुन्दर समुद्र तट छ। तपाईं यस समुद्रीतटमा हिंड्न सक्नुहुन्छ। त्यतिबेला तपाईले आफ्नो अगाडि डेन्सेन नामको सुन्दर पहाड देख्नुहुनेछ। यो हिउँद हिउँदमा हिउँले ढाकिएको छ।
यदि तपाईं जाडो मा काइके ओन्सेन होटेल वा र्योकन (जापानी शैलीको होटल) मा बस्नुहुन्छ भने तपाईंसँग प्रशस्त क्र्याबहरू हुन्छन्। क्र्याब र तातो स्प्रि andहरू र सुन्दर दृश्य। अरू के आवश्यक छ?
>> Kaike Onsen को विवरणको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइटको भ्रमण गर्नुहोस्